Rosia, Tadjikistan : Iza No Mahatsiaro Ho Tohina Amin’ilay “Torohay Ho An’ireo Mpiasa Mpila Ravinahitra”? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Novambra 2012 8:23 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Español, русский
Fanamarihan'ny mpamoaka lahatsoratra: Ity lahatsoratra ity, dika nasiam-panamboarana avy amin’ilay lahatsoratry ny bilaogin'i Olga Tutubalina ao amin'ny tranonkala Asia Plus dia nivoaka voalohany tao amin'ny tranonkalam-baovao miorina ao Dushanbe Asia-PLUS. Global Voices Online moa dia manana fiaraha-miasa amin'ny Asia-PLUS.
“Ireo Mpanorina ny Firenena”, sampan'ny tanora ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana ao Tadjikistan, ny “Parti populaire démocratique”, dia nanakiana ny «Le guide du travailleur immigré» [pdf]- torohay ho an'ireo mpiasa mpila ravinahitra (azonareo vakiana ny lahatsoratry ny Global Voices natokana ho an'io torohay io eto, amin'ny teny Anglisy) izay vao nivoaka ao Rosia. Ny mpitarika io sampana io, Adram Mirsaïdov, dia nanambara fa ireo sary nentina nanaingo ilay torohay, izay nentina naneho ireo mpiasa mpila ravinahitra ho toy ny fitaovana ampiasaina amin'ny asa fanorenan-trano, dia manafintohina sy manetry ny fihetsehampo nasionalin'ireo tadjiks mpiasa mpila ravinahitra. «Mangataka tsy misy hatak'andro amin'ireo sampan-draharaham-pitantanana voakasik'izany ao amin'ny Federasionan'i Rosia “Ireo Mpanorina ny Firenena” mba handray ny fepetra ahafahana miantoka fa voatsoaka sy nopotehana io torohay voalaza ery ambony io», hoy izy.
Azo takarina ihany hoe manafintohina ilay torohay. Nahoana ary no tena toy izany no fomba nanaovan'ireo mpamoroan azy io, miaraka amin'ireo sary fanaingoana ireo, tsy hay mihitsy. Azo eritreretina ihany hoe an'ireo Tadjiks ihany ny hadisoana – raha ny fahitàna azy, dia afangaro amin'ny kifafa, ny fandoko ary ireo fitaovana hafa fanaovan-trano ireo teratany avy any Tadjikistan ao Russie. Saingy amin'ny lafiny ilany, tsy hoe mpitsabo , na profesora manampahaizana manokana mihitsy izy ireo, na ireny tampom-pahalalàna nifindra monina nankany Rosia ireny.
Sary fanaingoana nalaina tao amin'ilay “Torohay ho an'ireo mpiasa mpila ravinahitra”
Tsy isalasalàna fa nanafintohina olona maro ireny sary ireny ; ny hafa, amin'ireo mpiasa mpila ravinahitra ihany, tsy miraharaha izay fanehoana azy ireo amin'ny saiitatra any, rehefa mbola misy ihany ny azon'izy ireo atao mba hiainana.
Mety angamba tsy olona matihanina no nanoratra ireny torohay ireny. Saingy tsy amin'izay resaka izay no tokony hibanjina ny “Parti populaire démocratique” ao Tadjikistan. Fa kosa, izay tena henjana noho ny namoahana io torohay io, amin'ity fihatsaram-belatsihy efa mahazatra ity manoloana ireo izay mody lazaina fa arovana.
Ity sobin-tantara ity raha ny marina dia tsy inona fa resaka tsy fifankahazoan-dresaka kidaladala, izay tsy mila anaovna tsoa-kevitra lalina amin'ny resaka nasionalisma ao Rosia. Ndeha hojerentsika amin'ny antsipirihany ny fomba itondràn'ity Rosia fahavalo ity ireo tadjiks mpiasa mila ravinahitra ary indrindra fa ireo teratany avy any Tadjikistan amin'ny ankapobeny, sy izay ataon'ny governemantany ihany ho azy ireo.
Inona no mba ataon'i Rosia ?
Alavain'i Rosia ny fe-potoana ahazoan'ireo teratany tadjiks mipetraka eo amin'ny taniny. Ary koa ny faharetan'ny fahazoan-dàlana hiasa.
Andefasan'i Rosia profesora ampolony mankany Tadjikistan mba hahazoan'ireo zanatsika fanabeazana. Manokatra departemanta eny amin'ny anjerimanontolo mihitsy aza i Rosia any amin'ny Repoblikantsika.
Manokata sekoly ho an'ny zanak'ireo mpiasa mila ravinahitra ao amin'ny taniny i Rosia.
Avelan'i Rosia, amin'ny resaka lalàna, ireo Tadjiks mba hiasa eo amin'ny taniny. Azo lazaina ihany koa anefa hoe mila azy ireo izy, na i Tadjikistan tenany aza izay tsy afaka hivoaka ny tsenan'asa rosiana mba hivelomana.
Rosia (na dia misy tambiny aza ; tsy mahakasika ny olon-tsotra akory izy ireny) dia nanafoana ny haba fandoa amin'ny ladoany ho an'ny vokatra avy amin'ny solikany.
Inona no ataon'i Tadjikistan ?
Ampiakarin'i Tadjikistan ny sandan'ny antso amin'ny telefaona mankany Rosia.
Imbetsaka i Tadjikistan (tao anivon'ny governemanta tao) no efa nametraka fanontaniana ny amin'ny tokony hakàna haba amin'ny vola ampodian'ireo mpiasa mila ravinahitra.
Ahenan'ny ministeran'ny fitantanam-bola ny haavon'ny fiahiana asa-tsosialy ho an'ny saranga farany ambany eo amin'ny fiarahamonina sy ireo efa misotro ronono.
Tsy manana fahafahana hamoky sy hanome hafanana ho an'ny vahoakany i Tadjikistan. Na hoa hanome azy ny fanabeazana mendrika sy hiantoka asa tsara karama ho azy.
Noho izany, atsaharo ny miresaka ny firaisana sy ny hambom-pom-pirenentsika, tsy misy zavatra tokana izany aty amintsika. Mianara aloha manaja tena. Tsy hoe satria ianareo tadjiks, fa kosa satria ianareo olombelona. Amin'izay fotoana dia hanomboka hanaja anareo koa ny hafa. Zavatra mazava be ireo, nefa iaraha-mahita, mila hajaina izy ireny.
22 Mey 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana
29 Avrily 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana
28 Avrily 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana
Thank you for translating this post!
19 Novambra 2012, 19:58
You’re welcome Ekaterina
19 Novambra 2012, 20:36